Homeसमाचारअब शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध, एक दशकभित्र सबै स्कुल एउटै ढाँचामा !
January 13, 2019 Spnews समाचार Comments Off on अब शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध, एक दशकभित्र सबै स्कुल एउटै ढाँचामा !
सबै किसिमका विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए । यसअघि तयार गरेको खाकामा आगामी ७ वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई ट्रस्ट वा गुठीमा लैजाने उल्लेख गरिएको थियो । निजी विद्यालयको लबिङपछि ३ वर्ष थपेर १० वर्ष कायम गरिएको छ । याे खबर आजकाेनेपाल समाचारपत्रमा छ ।
अब शिक्षकलाई राजनीति गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध
एक दशकभित्र सबै स्कुल एउटै ढाँचामा !
यस्तो बिद्यालय जहाबाट सर्टिफिकेटसँगै १८ वटा जिवनोपयोगी सिप सिकेर निपूर्ण हुन्छन् बिद्यार्थिहरु